January 2020 - ALANZAYAR
မွနျမာပွညျကို တကယျခဈြတယျဆိုရငျ ဒီစာကို ဖတျထားပွီး လိုကျနာကွပါ…
မွနျမာပွညျကို တကယျခဈြတယျဆိုရငျ ဒီစာကို ဖတျထားပွီး လိုကျနာကွပါ… အိန္ဒိယသမ္မတ ပြောသွားတဲ့ “မင်းရဲ့နိုင်ငံအတွက် အချိန် ၁၀ မိနစ်လောက် ပေးနိုင်မလား´´တဲ့ ပေးနိုင်ရင် ဒီစာလေးကို ဖတ်ကြည့်ပါ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေအတွက် လည်းတိုက်ဆိုင်လွန်းလို့ သူငယ်ချင်းတို့အချိန်ယူပြီး ဖတ်စေချင်တယ်။ အချိန်နည်းနည်းပေးပြီး ဖတ်ပေးပါ။ ဒီစာကို ဖတ် ပြီးသွားရင် […]
ရနျကုနျက ဗိုလျခြုပျဈေးမှာ Mask တှလြှေူနတေဲ့ မွနျမာပွညျရောကျနသေော ပွငျသဈ၊ဘယျလျဂြီယံနိုငျငံသားမြာ….
ရနျကုနျက ဗိုလျခြုပျဈေးမှာ Mask တှလြှေူနတေဲ့ မွနျမာပွညျရောကျနသေော ပွငျသဈ၊ဘယျလျဂြီယံနိုငျငံသားမြာ…. ရန်ကုန်က ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှာ Mask တွေလျှူနေတာပါရှင်….. မြန်မာပြည်ရောက်နေတဲ့ ပြင်သစ်၊ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံသားများက….. လက်တစ်ဖက်ကမ်းကြမယ်ပရဟိတအဖွဲ့နဲ့အတူ ကူညီ‌ဝေငှပညာပေးပါဝင်ပါတယ်…. ဆက်လက်ပီး ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များနဲ့ မြို့လည်လမ်းမများမှာ ဆက်လက်လျှူဒါန်းနေပါတယ်ရှင်…. မြန်မာပြည်ကြီး ကျမ်းမာ ဘေးကင်းကြပါစေ…။ ၃၀ ရက် ဇန်နဝါရီလ […]
ကပျဘေးရဲ့ နောကျဆကျတှဲအဆငျ့မှာ ခှေးတှအေူပွီး အရိပျမဲမဲကွီးတှေ နရောအနှံ့တှရေ့လိမျ့မယျ
ကပျဘေးရဲ့ နောကျဆကျတှဲအဆငျ့မှာ ခှေးတှအေူပွီး အရိပျမဲမဲကွီးတှေ နရောအနှံ့တှရေ့လိမျ့မယျ ငှက်တွေ ကောင်းကင်မှာပျံနေရင်းနဲ့မျက်လုံးတွေလည်ပင်းတွေကနေ သွေးတွေထွက်ပြီးပြုတ်ကျကုန်တယ်…. နှံကောင်တွေ အများကြီး ယာခင်းတွေဆီကို ဆင်းလာပြီးဖျက်စီးတယ် ….ငှက်တွေအစုလိုက်အပြုံလိုက် လူတွေနဲ့ အနီးဆုံးကိုရောက်လာတယ်…. အဲဒါတွေက ကပ်ဘေးရဲ့ဒုတိယအဆင့်ပါ…. ပထမအဆင့်က ရောဂါပိုးကူးစက်တယ်….. ကပ်ဘေးဆိုတာ တဆင့်ပြီးတဆင့်လာတာပါ….. တတိယ အဆင့်က […]
အမှတ်မထင်တွေ့ဖြစ်သွားတဲ့ အဆိုတော်မေသက်ထားဆွေနဲ့ မျက်မမြင် အနုပညာသည် ဦးသန့်ဇင် နဲ့ ဒေါ်ရီရီထွန်း။ အနားနားမှာဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို ဆိုပြ
အမှတ်မထင်တွေ့ဖြစ်သွားတဲ့ အဆိုတော်မေသက်ထားဆွေနဲ့ မျက်မမြင် အနုပညာသည် ဦးသန့်ဇင် နဲ့ ဒေါ်ရီရီထွန်း။ အနားနားမှာဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို ဆိုပြ မျက်မမြင် အနုပညာသည် ဦးသန့်ဇင် နဲ့ ဒေါ်ရီရီထွန်း တို့ဟာဆိုရင်တော့ သီချင်းလေးတွေသီဆိုပီး သူတို့ဝမ်းစာအတွက် ရှာဖွေစားသောက်နေရတဲ့ မသန်စွမ်းသူများဖြစ်ပီး ပီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကမှ အဆိုတော်ချယ်ရီသင်းရဲ့သီချင်းလေးနဲ့အတူ လူသိများလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း သူတို့အင်တာဗျူးတစ်ခုတက်လာပီး […]
ကိုယ့်ရင်သွေးကို စွန့်ပြစ်ရဲတဲ့ မိန်းမတွေလည်း ရှိကြသည်။ရုပ်သံ
ကိုယ့်ရင်သွေးကို စွန့်ပြစ်ရဲတဲ့ မိန်းမတွေလည်း ရှိကြသည်။ရုပ်သံ ကမ္ဘာကြီးမှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးသတ္တ၀ါကိုပြပါဆိုလျှင် လူသားများကိုသာပြရပါလိမ့်မည်။ ထို့အတူပဲ အကြင်နာတတ်ဆုံး အသိဥာဏ်ရှိဆုံးကိုပြဆိုလျှင်လည်း လူတွေကိုသာပြရပါလိမ့်မည်။ လောကကြီးမှာ ကောင်းတဲ့လူရှိသလို မကောင်းတဲ့လူတွေကလည်း ဒုနဲ့ဒေး။ ဒီနေ့ပြောချင်တာက စွန့်ပစ်ကလေးကိစ္စတွေ။ ဒီလောက် တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ ကလေးမရအောင် တာဆီးနိုင်တဲ့ ဆေးတွေ ပစ္စည်းတွေဒီလောက် ဘုန်းပေါလအော အလွယ်တကူရရှိနေပါသော်လည်း […]
” ပရိသတျတှမေသိသေးတဲ့ သူ့ရဲ့ အနုပညာအရညျသှေးတဈခုကို ထုတျပွလိုကျတဲ့ သီဟအောငျ “
” ပရိသတျတှမေသိသေးတဲ့ သူ့ရဲ့ အနုပညာအရညျသှေးတဈခုကို ထုတျပွလိုကျတဲ့ သီဟအောငျ “ ပရိသတျကွီးရေ သီဟအောငျ ရဲ့ ပရိသတျတှထေဲမှာ နှုတျခမျးနီမလေးတှေ ကတော့ အမြားဆုံးပါပဲနျော။ ကိုရီးယားမငျးသားလေးတဈယောကျလို ခြောမောတဲ့ ရုပျရညျကိုပိုငျဆိုငျထားတာကွောငျ့ နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲ့ အသညျးစှဲ ဖွဈနရေတာအမှနျပါပဲနျော။ နှုတျခမျးနီမလေးတှေ ရဲ့အခဈြတှပေိုစတေဲ့ နောကျထပျတဈခကျြကတော့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ TikTok […]
အွန်လိုင်းပေါ်နာမည်ကြီးနေတဲ့ မျက်မမြင်ဇနီးမောင်နှံရဲ့ မိဘမေတ္တာကြီးမားချက် သားဖြစ်သူကို ဘွဲ့ရပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင် ကျောင်းထားပေးခဲ့ Vidoe
အွန်လိုင်းပေါ်နာမည်ကြီးနေတဲ့ မျက်မမြင်ဇနီးမောင်နှံရဲ့ မိဘမေတ္တာကြီးမားချက် သားဖြစ်သူကို ဘွဲ့ရပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင် ကျောင်းထားပေးခဲ့နိုင်ပီ။ အွန်လိုင်းပေါ်နာမည်ကြီးနေတဲ့ မျက်မမြင်ဇနီးမောင်နှံရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကတော့ လေးစားစရာပါ VIDEO ကြည့်ရန်နှိပ်ပါ အခြားအဆိုတော်တွေရဲ့သီချင်းလည်းဆိုပါတယ်။ ချယ်ရီသင်း သီချင်းနဲ့မှ အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်သွားတာ လို့ဆိုလာတဲ့ မျက်မမြင် အနုပညာသည် ဦးသန့်ဇင် နဲ့ ဒေါ်ရီရီထွန်း ဝမ်းစာအတွက်သီချင်းသီဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးဖို့ တေးရေးဆရာနဲ့ […]
“ရှကွေိုမယျတဈယောကျအနနေဲ့ ဝငျရောကျအရှေးခယျြခံမယျ့လူရှငျတျော အောငျသျောရဲ့ သမီးခြောလေး”
“ရှကွေိုမယျတဈယောကျအနနေဲ့ ဝငျရောကျအရှေးခယျြခံမယျ့လူရှငျတျော အောငျသျောရဲ့ သမီးခြောလေး” မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ထိပျတနျးလူရှငျတျောအဖှဲ့တဈဖှဲ့အနနေဲ့အောငျမွငျမှုတှရေရှိနတေဲ့ “5 စတား”အဖှဲ့ကိုတော့ ပရိသတျတှသေိရှိပွီးသားဖွဈမှာပါ။ “5 စတား”အဖှဲ့ရဲ့ အဖှဲ့ဝငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ လူရှငျတျော အောငျ သျောကတော့ လူရှငျတျောတဈယောကျအနနေဲ့ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခဈြခငျမှုကို ရရှိထားတဲ့ အပွငျ ဇာတျပို့ဇာတျရံသရုပျဆောငျကောငျးတဈယောကျလညျး ပရိသတျ လကျခံအားပေးမှုတှရေရှိထားတဲ့ သူတဈယောကျပါ။ ဒီနှဈရဲ့ မွနျမာရုပျရှငျထူးခြှနျဆု […]
ဖိနပ်ခိုးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မိန်းမလှလေးတွေဟာ သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ CCTV ကိုမြင်ပြီး ထွက်ပြေးသွားတဲ့ ( ရုပ်သံ)
ဖိနပ်ခိုးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မိန်းမလှလေးတွေဟာ သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ CCTV ကိုမြင်ပြီး ထွက်ပြေးသွားတဲ့ ( ရုပ်သံ) တိုက်ခန်းတွေမှာ နေထိုင်လျက်ရှိတဲ့လူအများစုဟာ သူတို့ရဲ့ဖိနပ်တွေကို မသန့်ရှင်းလို့ ၊ အနံ့ဆိုးလို့ဆိုပြီး အပြင်ဖက်မှာထားလေ့ရှိပါတယ် ။Video မှာပြထားတဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံက မိန်းမလှလေးနှစ်ယောက်ဟာလည်း တိုက်ခန်းအပြင်ဖ က်မှာရှိတဲ့ ဖိနပ်စင်ရှေ့မှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး ဖိနပ်ခိုးဖို့ရွေးနေကြပါတယ် ။ ထိုအချိန်မှာ […]
ကွညျ့ပွီးပွီလား အရှယျနဲ့ မလိုကျအောငျ သီခငျြးဆိုတဲ့ သမီးလေး
ကွညျ့ပွီးပွီလား အရှယျနဲ့ မလိုကျအောငျ သီခငျြးဆိုတဲ့ သမီးလေး လူမှုကွန်ယက်မှာ လူကြည့်များပြီး အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် သီချင်းပေါင်းစုံ ဆိုနိုင်တဲ့ ဝါသနာရှင် သမီးလေး နမ့်ချစ်ဝိန်ဝိန် သီချင်းပေါင်းစုံကို အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် ဟန်ပန်အပူအရာလေးတွေနဲ့ ဆိုပြနိုင်တဲ့ အပြင် တစ်တော့မှာလည်း အပူအရာပေါင်းစုံလုပ်ပြတတ်တယ်။ ကြည့်ရသူတိုင်း က ချစ်တဲ့ […]